Saw Aung Thura
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်သွားတာ နှစ် ၂၅၀၀ ကျော်ပြီ။မရှိတော့တဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်လို့ ရသေးသလား။ကိုးကွယ်နေလို့ကော အကျိုးရှိပါမလား။
ဗုဒ္ဓဘာသာက ဆင်းတုတွေ၊ ရုပ်ပုံပန်းချီကားတွေကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာလား?ဆင်းတုတွေ ရုပ်ပုံတွေကို ရှိခိုးကိုးကွယ်နေလို့ ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားဟာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်သွားပြီ ဖြစ်ပေမဲ့သူဟောကြားထားတဲ့ တရားအဆုံးအမတွေက ပကတိအတိုင်း ရှိနေကြတုန်းပဲ။သူဘုရားဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တာ အခုလို တရားအဆုံးအမကို ဟောပြဖို့ပဲ။
ဒါတွေက အခု အကုန်ရှိနေသေးတာမို့ ဒီတရားတော်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်ရင်း မြတ်ဗုဒ္ဓရှိစဉ်တုန်းကလိုပဲ ထပ်တူထပ်မျှ အကျိုးထူးများကိုခံစားရပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်း မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီမှာ ဗုဒ္ဓကိုယ်စား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ဖို့အတွက်စေတီ ၄ မျိုးကို သတ်မှတ်ပေးတော်မူခဲ့တယ်။
ဓာတုစေတီ… ဗုဒ္ဓရဲ့ ရုပ်ကလပ်တော်ကို မီးသဂြိင်္ုဟ်တဲ့အခါ ကျန်ရစ်တဲ့ဓါတ်တော်များကို ဘုရားရှင် ကိုယ်စားကိုးကွယ်နိုင်တယ်။
ဓမ္မစေတီ… ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ၄၅ နှစ်တိုင်တိုင် ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ မဂ်လေးတန်၊ ဖိုလ်လေးတန်နဲ့ နိဗ္ဗာန်တရားတို့ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်စား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နိုင်တယ်။
ဥဒ္ဒိဿစေတီ… သက်တော်ထင်ရှား မြတ်ဘုရားကို ရည်မှန်းပြီး ရေးသားတဲ့ ပုံတော်၊ပန်းချီကားချပ်တွေ၊ သစ်သားဆင်စွယ် စသည်တို့ကို ထုလုပ်ထားတဲ့ ဆင်းတုတွေ၊အုတ်၊ သဲ၊ အင်္ဂတေ စသည်တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားတဲ့ စေတီပုထိုးတွေ၊ဒီအရာတွေအားလုံးကို ဘုရားရှင်ကိုယ်စား ရှိခိုးပူဇော်နိုင်တယ်။
ပရိဘောဂစေတီ… မဟာဗောဓိပင် အပါအ၀င် ဘုရားရှင် အသုံးပြုတော်မူခဲ့တဲ့ သပိတ်၊သင်္ကန်း၊ တောင်ဝှေးစသည်တို့ကိုလည်း ဘုရားရှင်ကိုယ်စားဆည်းကပ်ကိုးကွယ်နိုင်တယ်။
အဲဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ပုံတော်ပန်းချီကားတွေ၊ဆင်းတုတွေကို ရှိခိုးပူဇော်တာဟာ ဥဒ္ဒိဿစေတီအဖြစ် ရည်မှန်းပြီးရှိခိုးပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ပန်းချီကားအနေနဲ့ ရုပ်ထု၊ဆင်းတုတော်များအနေနဲ့ ရှိခိုးပူဇော်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
ဥပမာ… ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့ မိဘများရဲ့ဓါတ်ပုံကို ရှိခိုးကန်တော့နေတဲ့သူဟာစက္ကူဓာတ်ပုံကို ရှိခိုးကန်တော့နေတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့မိဘကို ရည်မှန်းပြီးရှိခိုးကန်တော့နေခြင်းဖြစ်တယ်။ မိဘဓာတ်ပုံက အသက်ထင်ရှား ရှိစဉ်အခါကမိဘတို့ရဲ့ ရုပ်ပုံကိုထင်မြင်လာအောင် အထောက်အပံ့ပြုတယ်။ မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေ ထင်ပေါ်လာအောင် ကျေးဇူးပြုပေးတယ်။
စက္ကူဓာတ်ပုံကို ကျော်လွန်ပြီး မိဘတို့ရဲ့ တကယ့်ရုပ်သွင်နဲ့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများ ပေါ်လွင်လာအောင် ကြည့်ရှူရသလို ဘုရားပန်းချီ၊ရုပ်ထု၊ ဆင်းတုများကိုကျော်လွန်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တကယ့်ရုပ်သွင်နဲ့ဂုဏ်တော်များ၊ ကျေးဇူးတော်များပေါ်လွင်အောင် ကြည့်ရှုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပုံတော်၊ ဆင်းတုတော်တိုဟာ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းမျှသာဖြစ်တယ်။ပုံတော်၊ ဆင်းတုတော်တွေ မရှိဘဲနှင့်လဲ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်များကိုရည်မှန်းပြီး ရှိခိုးပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်များဆီသို့ စိတ်ရောက်တာချင်းတူရင်အကျိုးကျေးဇူးကလည်း တူမှာပဲ။ ဂုဏ်တော်များစုပေါင်းထားတဲ့ ဘုရားရှင်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင် အာရုံပြုရမယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ရုပ်ပုံ၊ ရုပ်ထုတွေကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက မသိ၊ နားမလည်သူတွေရဲ့ လွဲလွဲမှားမှားစွပ်စွဲမှုများသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်နေတာက အရဟံအစ ဘဂ၀ါအဆုံး အတုမရှိတဲ့ဂုဏ်တော်များရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရား၊ထိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားညွှန်ပြခဲ့တဲ့ မဂ်လေးတန်၊ ဖိုလ်လေးတန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတ်လို့ဆိုတဲ့အတုမရှိ မြင့်မြတ်တဲ့ ဓမ္မတရား၊ သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို သိမြင်ကြပြီးတဲ့ အရိယာသံဃာများနဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩ၀ါဒအတိုင်း ကျင့်ကြံနေကြတဲ့ သမုတိသံဃာ၊ ဒီဘုရား၊ တရား၊သံဃာလို့ဆိုအပ်တဲ့ ရတနာမြတ်သုံးပါးပါပဲ။
ဒီလို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ထိုက်တဲ့ အမြတ်ဆုံးရတနာ သုံးပါးဆိုတာ အခြားဘယ်မှာရှာဖွေလို့ ရနိုင်ပါတော့မလဲ။
www.burmaborn.blogspot.com မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
Posted in ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် by Saw Aung Thura |2comments
by Saw Aung Thura | 1 comments
ကျပ် ၇ဝ နဲ့ ထမင်းတစ်နပ်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်
ဇွန်ပန်းပွင့် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ၊၂၀၁၀။
သူတို့ရဲ့ဆံပင်တွေက နီကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်။ ဖုတ်သိုက်သိုက်ဆံပင်ရှည်အုပ်ကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ မျက်နှာတွေကို အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ရင့်ရော်စေပါတ်။ သူတို့တွေနားကပ်ရင် ကာဘော်လစ် ဆပ်ပြာနံ့လိုလို ပြင်းရှရှအနံ့ဟာ မခံနိုင်လွန်းအောင် နံစော်နေတယ်။
ဖာထေးရာတွေ ထင်သာမြင်သာလွန်းတဲ့ ညစ်ထူထူ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်လူတွေ၊ ကာဘော်လစ်အနံ့တွေကြိုင်နေတဲ့ ယောက်ျားကြီးတွေဟာ ပင်ပန်းတဲ့ တစ်နေ့တာအလုပ် ပြီးချိန်မှာ လွယ်အိတ်စုတ်လေးတွေကို စလွယ်သိုင်းပြီး အဲဒီထမင်းဆိုင်နားမှာ အုံနေတတ်တယ်။
ဒေါ်လွင်လွင်မေက တစ်နေ့ကို အသားငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဟင်းအမည်(အမယ်) ၁၅ မျိုးလောက်ကို အကူမပါ ကိုယ်တိုင်တစ်ဦးတည်း ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီး ညနေ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေ အလုပ်သိမ်းချိန်မှာ ခင်းကျင်းရောင်း ချနေတဲ့ဆိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
“လက်လုပ်လက်စား တော်တော်များများက ကျပ်တည်းကြပါတယ်။ ဆင်းရဲကြတယ်။ အဲဒီလို ဆင်းရဲတဲ့သူ တွေရဲ့ အခက်အခဲကို ဘယ်လိုကူညီသင့်သလဲဆိုပြီး စဉ်းစားကြည့်တယ်။ နောက်ပြီး ကြီးမေတို့မြန်မာ လူမျိုးတွေက ထမင်းကြိုက်တတ်တယ်။ ငါးပိကြိုက် တတ်တယ်။ အသားငါးလေးကိုလည်းစားချင်တာလေး စားရအောင်ဆိုပြီး အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကို ဝက်သားဟင်းဆိုလည်း ၅ဝ ဖိုး ရော့ အင့် ဆိုပြီး ထမင်းလေးနဲ့ ဟင်းလေးနဲ့ ငွေလေး ၇ဝ - ၈ဝ (ကျပ်) ပါလာတယ်ဆိုလည်း ရော့ ထမင်းရော ဟင်းရောယူ ဆိုပြီးရောင်း တယ်။ ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်းဝ၊ ဒါနလေးလည်း မြောက်အောင်ပေါ့ သမီးလေးရယ်” လို့ အဲဒီလုံမေခင် ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်လွင်လွင်မေက ပြောပြပါတယ်။
“ကျွန်မ ငွေငါးသိန်းဖိုး၊ ၁ဝ သိန်းဖိုးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း မလှူနိုင်ပါဘူး။တစ်နေ့ကို ၅ဝ၊ ၁ဝဝ နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုး ပီပီ၊ နိုင်ငံကြီးသားပီပီ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်တာ။ အထွတ်အမြတ်လည်းဖြစ်တယ်။ ကုသိုလ်လည်းရတယ်။ ဝမ်းလည်း ဝတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူး လေးနဲ့လည်း လုပ်တယ်။ ကိုယ်သေရင် ကိုယ့်နောက်ကိုဘာမှ မပါပါဘူး။ ဒီကုသိုလ်ပဲ ပါမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ဒီထမင်းဆိုင်မျိုးကို ဖွင့်ဖြစ်တာပါ” လို့ ဒီဆိုင်ဖွင့်လာတာ ခုနစ်နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လွင်လွင်မေက ပြောပြပါတယ်။
ထမင်းဆိုင်စဖွင့်တဲ့အချိန်တုန်းကဆို ဟင်းအမယ်(၂၃)မျိုးလောက်ကို သူတစ်ဦးတည်းစီမံပြီး ရောင်းချခဲ့ တယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။
“စရောင်းတုန်းက ထမင်းတစ်ပွဲ ၅ဝ၊ ဟင်းတစ်ပွဲ ၅ဝ နဲ့ ရောင်းတယ်။ တဖြည်းဖြည်း နည်းနည်းဈေးတက် လာတော့ ထမင်း ၁ဝဝ၊ ဟင်း ၁ဝဝ နဲ့ ရောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုက်ဆံ ၅ဝ တန်၊ ၂ဝ တန် အဟောင်းလေးတွေ လက်ထဲကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီး လာဝယ်ရှာတဲ့သူတွေကိုလည်း ဟင်းရော၊ ထမင်း ရောရောင်းပြီး ပေးသလောက် ယူပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဟင်းတွေကတော့ အမယ်တော်တော် စုံပါတယ်။ ဝက်သားဟင်း၊ ဝက်ကလီစာ၊ ဆိတ်ခေါင်း၊ ဆိတ်ကြော၊ အမဲသား၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ အာလူးကြော်၊ အစိမ်းကြော်၊ ငါးပိကြော်၊ ငါးလေးဟင်း၊ ကြက်သား စတာတွေကို အသားဟင်း တစ်ပွဲ (၁ဝဝ) အသီးအရွက် (၅ဝ) နဲ့ရောင်းပါတယ်။
“ဟင်းတွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းနိုင်အောင် မနက်ဆို ဈေးပေါင်ကျိုးလေးကို သွားတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်ဈေးလဲလို့ မေးလိုက်တယ်။ သူတို့က ဈေးကောင်းကောင်း (ဈေးကြီးကြီး) ပြောတယ်။ အဲဒီလိုဆို ကျွန်မက တောင်းပန်ပြီး ကျွန်မ ရောင်းတဲ့နေရာလေးက ဆားစက်၊ ကျောက်စက်၊ အုတ်သဲကျောက် အထမ်းသမား၊ အလုပ်ကြမ်းသမားလေးတွေ ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဆင်းရဲတဲ့ ရပ်ကွက်ကလေးဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူတို့လေးတွေ မစားနိုင်မှာစိုးလို့ ဈေးရောင်းတဲ့ သူလည်းမရှုံးအောင် ကျွန်မကိုဈေးချိုတဲ့ နှုန်းလေးနဲ့ ရောင်းပေးပါဆိုပြီး အချိုသာဆုံးပြောပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ငရုတ်သီးထောင်းပြီး ဟင်းကောင်း ကောင်းလေး ချက်ပြီး ရောင်းပါတယ်။
သူတို့တွေ ဖောဖောသီသီ လောက်လောက်ငင စားနိုင်အောင် ပိဿာလိုက် ဝယ်ပြီး ချက်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ၃,ဝဝဝ ဝန်းကျင် လောက် မြတ်ပြီး ဟင်းတွေ ကျန်ရင်တော့ ကြီးမေငိုပြီး အိမ်ကိုပြန်ရတာပေါ့၊ သူတို့ လုပ်ငန်းလေး အဆင်ပြေလို့ ဈေးထဲမှာ ဟင်းကောင်းကောင်း သွားဝယ်စားရင် ကြီးမေ မရောင်းရဘူး။ သူတို့လုပ်ငန်းလေး ပါးရှားရင်တော့ ကြီးမေ ကြီးဆိုင်မှာ ၁ဝဝ ဖိုး ပေးပါ၊ ၅ဝ ဖိုး ပေးပါနဲ့ လာတောင်း တယ်။
တချို့လည်း မော်တော်ကားကြီးနဲ့ မြို့ထဲက လာပြီး ဟင်းကောင်းတယ် ကြားလို့ လာဝယ်စားကြတယ်။ တချို့က ဟင်း(၃ဝဝ)ဖိုး ဝယ်တယ်။ (၅ဝဝ)တန် ပေးပြီး (၂ဝဝ )ကျန်တာ ပြန်အမ်းရင် မယူဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကုသိုလ်ပါဝင်မယ်ဆိုပြီး မုန့်ဖိုးပေးသွား တယ်” လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
“အဲဒီလို လူမျိုးတွေကို ရောင်းရလို့ တစ်ခါတလေမှာ ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်တွေတောင် ဝိုင်းရပါတယ်။ တချို့လာဝယ်တဲ့ သူတွေထဲမှာ စီးစီး ပိုးပိုးလည်း ပါပါတယ်။ ကြီးမေက အများကြီး ထည့်ပေးတာတောင် တချို့က နည်းတယ်လို့ထင်ပြီး ထပ်ထည့်ခိုင်းတယ်။ နောက်တစ်ခုက လူတွေအုံနေရင် လက်ကြီးက ငါးကြော်တွေ နှိုက်ခိုးတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် တုတ်ကလေး ကောက်ပြီး အဲဒီခိုးတဲ့လက်ကို တောင်ခနဲ မြည်အောင်ခေါက်ရတယ်။ ဟဲ့ သူခိုး သူခိုး လို့ မအော်ရက်ဘူး။ အဲဒီလောက်ထိ စေတနာကောင်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံမပေးဘဲ ထွက်သွားတဲ့လူတွေ၊ မပေးဘဲနဲ့ ပေးတယ်ဆိုပြီး ငြင်းတဲ့လူတွေ၊ ပိုက်ဆံထက်ပိုင်းပြတ် ပေးတဲ့လူတွေ စတာတွေနဲ့လည်း ကြုံရပါတယ်” လို့ သူ့ရဲ့ထမင်းဆိုင်အတွေ့အကြုံတွေကို ဒေါ်လွင်လွင်မေက မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောပါတယ်။
“ဘယ်မှာမဆို အကုန်လုံးက ချမ်းသာတဲ့လူမျိုးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ထမင်းဟင်း ၅ဝ ဖိုး၊ ၁ဝဝ ဖိုးရောင်းတဲ့ နေရာတွေက ဟင်းဈေးကြီး ပေးဝယ်မစားနိုင်တဲ့ သူတို့လို အလုပ်ကြမ်းသမားတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မှာပါ” လို့လည်း သူက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
လုံမေခင်ထမင်းဆိုင်လေးကို စက်ဆန်း အေပီစီမှတ်တိုင်အနီး၊ သမိန်ပရမ်းလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်မှာ အားပေး သုံးဆောင် နိုင်ပါတယ်။
(မြန်မာပြည်မှဇွန်ပန်းပွင့်ဆိုသည့် သတင်းထောက်တစ်ဦး Myanmar Times တွင်ရေးသားထားသည့် Feature လေးတစ်ပုဒ်ကို ဆရာရော်နယ်အောင်နိုင် မှမျှဝေခံစားနိုင်ရန် ပေးပို့ထားပါသည်။ ဤရသဆောင်းပါးကို ကောင်းဝါသတင်းဌာန စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် ဝေမျှခံစားနိုင်ရန်အလို့ငှာ ထပ်ဆင့်ကူးယူ ဖေါ်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။)
by Saw Aung Thura |4comments
by Saw Aung Thura |0comments
"ဘုရားရှင်၏အံ့ဖွယ်တော် ( ၁၈ ) ပါး "
by Saw Aung Thura |2comments
နိဗ္ဗာန် အကျိုးမျှော်၍ ထပ်ဆင့်နိူးဆော်ခြင်း
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးတွင် ဆွမ်းအလှူ လှူဒါန်းလိုသူများ ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။
မိမိမွေးနေ့တွင် မွေးနေ့အလှူလုပ်လိုကြသူများအတွက် ၀မ်းမြောက်စွာဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါတယ်..
အပါး ၄၈၀ မှ ၅၀၀ ဝန်းကျင်ရှိ သံဃာများကို အရုဏ်ဆွမ်း (သို့မဟုတ်) နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ပါပြီ. မိမိတို့ အလိုရှိရာ ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။
အရုဏ်ဆွမ်း (မုန့်ဟင်းခါး/ကြာဇံချက်) - ၅ သောင်းကျပ်။
နေ့ဆွမ်း (ကြက်သား/၀က်သား+အာလူး+သရက်ချဉ်+မျှစ်နှင့်ချဉ်ပေါင် စသည်)- ၁ သိန်းကျပ် (ဆိတ်သားဖြင့်ကပ်လျှင် - ၁ သိန်း ၃ သောင်းကျပ် )
၁။ ယမက၀ဂ္ဂ (အခန်း-၁)
ဓမ္မပဒ (ပါဠိတော် - မြန်မာပြန် - အင်္ဂလိပ်)ဘာသာပြန် အပြည့်အစုံအားအောက်ပါနေရာတွင် ရယူပူဇော်နိူင်ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရေးစင်တာ
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ၊ မြန်မာနိုင်ငံ
ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာ ဟူသောအမည်ကို မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြား တော်မူခဲ့သော သုတ္တန်၊ ၀ိနည်း၊ အဘိဓမ္မာဟူသော ပိဋကတ်တော်များ၏ အနှစ်သာရကို ရှေးမူမပျက်ထိန်းသိမ်း လျက်မျက်မှောက် ခေတ်နည်းပညာ၊ ဘာသာစကားတို့ဖြင့် ယှဉ်တွဲ လေ့လာနိုင်သော နေရာတစ်ခု အဖြစ်ရည်သန်၍ မည့်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၌ ရဟန်းပြုသူများကို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရ ဘုန်းတော်ကြီး များဟုခေါ်ဆိုကြ၍ ထိုဘုန်းတော်ကြီးများက မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မများ နှင့် အခြားပညာရပ်များကို ဓမ္မနှင့်အညီ သင်ကြားပို့ချခြင်းကို ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးဟု ခေါ်ဆိုလေသည်။ အမှန် တကယ်အားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာ ဆိုသည်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ပင်ဖြစ်ပေသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်သာသနာဖြင့် အရှည်ခံ့၍ တည်တံ့ခဲ့ပေသည်။ သို့သော်လည်း ကုန်းဘောင်ခေတ် နှောင်းပိုင်း၌ နယ်ချဲ့တို့၏ မတရားကျူးကျော်မှုဖြင့် ကိုလိုနီနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ရပေသည်။ ထိုအချိန်ကာလတို့၌ မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် သူ့ကျွန်ဘ၀ ရောက်ရုံမျှမက ဘာသာသနာပါ မှေးမှိန်ခဲ့ရပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကဤကဲ့သို့မိန့်ဆိုခဲ့ပေသည်………..
“ တို့ပြည်ဌာနီ ရှေးခါဆီဝယ်
ရပ်ရွာလူများ လွန်လေးစားခဲ့ “ ……….. ဟူ၍လည်းကောင်း
ဆက်လက်ပြီး ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုလိုနီဘ၀၏ ဆိုးကျိုးများကို…..
“ ခုခါသို့နှယ် မဟုတ်ကွယ်၍
များစွာခုထက် တိုး၍ပျက်လိမ့် “ ဟုမိန့်ဆိုခဲ့လေရာ……..
…… ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာအဖွဲ့ (IBEC) မှနာယကရဟန်း တော်များအနေဖြင့် မိမိတို့တက်စွမ်းသမျှ အတက်ပညာများဖြင့် ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိသာသနာ အရှည်ခံ့၍ တည်တံ့စေရန်လည်းကောင်း၊ သာသနာ တော်ကြီးကို ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းကြ သောတိုင်းသူပြည်သားတို့၏ ရင်နှစ်သည်းချာ သားသမီးရတရနာ များအား လောကီ လောကုတ် ဓမ္မအမွေပေးနိုင်ရန် ပညာရေးသီးသန့် ၀န်ဆောင်မှုပေးမည့် ရဟန်းတော်များဖြစ်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင် သူတော်စင် အပေါင်းတို့အား စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ချပ်ကြား ချောင်၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရေးစင်တာ (IBEC) စီမံကိန်း တည်ဆောက်တော့မည့် အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာ မှဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
(၁) ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်
(၂) အခမဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း
(၃) အခမဲ့ ကွန်ပျူတာသင်တန်း
(၄) အခမဲ့ သာသန္တရသင်တန်း
(၅) ကမ္မဌာန်းဌာန (Meditation Centre) တို့ဖြစ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာ (IBEC) စီမံကိန်းတည်ဆောက်မည့် သံဃာတော်များသ်ည လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အရှည်ခံ့၍ တည်တံ့စေရန်လည်းကောင်း၊ ဘာသာတရား၏ အထိန်းအကွပ်ဖြင့် ပညာလိုလား သောအနာဂတ် သာသနာ့ အာဇာနည် ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ သီလရှင်များ၊ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်သား ကောင်းရတနာ၊ သမီးကောင်းရတနာများ ပေါ်ထွက်လာစေရန် လည်းကောင်း၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မနှင့် လောကဓတ်ပညာ များတက်မြောက်ကြပါက ယဉ်ကျေးလိမ္မာထက်မြက်သော အနာဂတ်မျိူးဆက်သစ်များ မလွဲမသွေ ဖြစ်လာကြစေရန် လည်းကောင်း ရည်သန်၍ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးဖြင့်မြှင့်တင် ပေးသွားပါမည်။
စာသင်သားရဟန်းသာမဏေများအား ပိဋကတ်စာပေကို အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်စေရန် ပစ္စည်းလေးပါး ထောက်ပံ့၍ စာသင်စာချ ဆရာတော်များဖြင့် စနစ်တကျသင်ကြားခြင်း၊ ထူးချွန်ထက်မြက်သော စာသင်သား များအား ပိဋကတ်စာပေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ယှဉ်တွဲလေ့လာစေခြင်း၊ သင်ကြားပို့ချခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသွား ပါမည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပညာရေးမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း၏ ရှိသင့်ရှိထိုက်သော ကဏ္ဍများပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီး မိဘမဲ့ကလေးငယ်များ၊ ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲရှိကြ သောကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား အခမဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးဖြင့် သင်ကြားသွားမည်။
(၃) အခမဲ့ ကွန်ပျုတာသင်တန်း
စာသင်သားရဟန်း၊ သာမဏေ၊ သီလရှင်များ၊ ကျောင်းသား /သူများအား ကွန်ပျူတာ အခြေခံ နည်းပညာများ တက်မြောက်အောင် သင်ကြားပေးသွားပါမည်။
(၄) အခမဲ့ ဘာသန္တရသင်တန်း
စာသင်သား သံဃာတော်များ နှင့် ကျောင်းသား /သူများအား အခြေခံမှစ၍ အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျင်စွာ ရေးတက်၊ ဖတ်တတ်၊ ပြောတတ်အောင် သေချာကျနစွာ သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အခြားသော (တရုတ်၊ ဂျပန်) အစရှိသော နိုင်ငံခြားဘာသာများကိုလည်း လက်လှမ်းမှီသ၍ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက် အောင်သင်ကြား ပေးသွားပါမည်။
(၅) ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာန ( Meditation Centre )
နာယကဆရာတော်များ၊ စာချဆရာတော်များ၊ စာသင်သားများ၊ ကျောင်းသား / သူများအား နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စုပေါင်း၍ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို အားထုတ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား ကိုအားထုတ်လိုသူများအား လည်း ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားဘဲ လက်ခံ၍ တရားအားထုတ်စေမည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာ (IBEC) စီမံကိန်းတည်ဆောက်မည့်တည်နေရာ
ဥမှင်သုံးဆယ် ဘုရားအနောက်ဘက်မှ ဖြာဆင်းလာသော တောင်ကုန်းပေါ်၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရေးစင်တာ (IBEC) ဘုရားစေတီ တည်ထားကိုးကွယ်၍ ဥမှင်သုံးဆယ်ဘရား အထိစောင်းတန်း တည်ဆောက်မည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာ (IBEC) ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ-
(က) သြ၀ါဒစရိယ ဆရာတော်များ
(ခ) နာယက ဆရာတော်များ
(ဂ) ၀န်ဆောင် သံဃာတော်များ
(င) ဥပတ္ထ မ္ဘကအဖွဲ့များ ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
The Project Of Monastic Education
လုပ်ငန်းကြီး ( ၅ ) ရပ် Five working plans
၁။ ပရိယတ္တိသင်ကြားရေးဌာန 1. Department of Teaching Buddhist scripture
၂။ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးအထက်တန်းကျောင်း 2. Department of Monastic Education High School
၃။ ကွန်ပျူတာ သင်ကြားရေးဌာန 3. Department of Computer Training
၄။ ဘာသနရ သင်ကြားရေးဌာန 4. Department of Foreign Language
၅။ ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာန 6. Department of Mediation
စစ်ကိုင်းတောင် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့ Sagaing Hills, Sagaing City.
ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ရန် လှူဒါန်းနိုင်သော စာရင်းများ
၁။ သစ်တစ်တန် ၇၀၀၀၀၀ ကျပ်
၂။ သံတစ်တန် ၆၀၀၀၀၀ ကျပ်
၃။ ထုံးတစ်ပေ ၈၅၀၀၀ ကျပ်
၄။ သုံးမှုးကျောက်တစ်ကျင်း ၂၃၀၀၀ ကျပ်
၅။ ကျောက်ကြီးတစ်ကျင်း ၁၂၀၀၀ ကျပ်
၆။ သဲတစ်စီး ၉၀၀၀ ကျပ်
၇။ အုပ် ၁၀၀ခဲ ၆၅၀၀ ကျပ်
၈။ ဘိလပ်မြေတစ်အိပ် ၆၀၀၀ ကျပ်
၉။ သွပ်တစ်ချပ် ၃၀၀၀ ကျပ်
၁။ အရှင်ကောဝိဒ (ကလေး)
၂။ အရှင်ဝဏ္ဏိတ (ရွှေဘို)
၃။ အရှင်သုန္ဒရ (ပုသိမ်ကြီး)
၄။ အရှင်ကုမာရဓဇ (မုံရွာ)
၅။ အရှင်စန္ဒာဝရ (နောင်ချို၊ ရှမ်း/မြောက်)
၆။ အရှင်စန္ဒာဝရ (တံတားဦး)
၇။ အရှင်နန္ဒာသီရိ (ကျွန်းလှ)
၉။ မသိင်္ဂါသီရိ (မြစ်ကြီးနား)
၁၀။ မဝေရပတိ (မြို့သာ)
Singapore ရောက်မြန်မာသူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်းများ အနေဖြင့် တက်အားသရွေ့ပါဝင် ဒါနပြုလှူဒါန်းနိုင်ကြပြီ
ဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန် - ကိုညီညီထွေး (PH. +65-96508524 )
ကိုသီဟဝေ (PH. +65-94597113 )
ကိုသိန်းရွှေဦး (PH. +65-83646462 )
ကိုသန့်ဇင် (PH. +65-93645137 )
မခိုင်သင်းအေး (PH. +65-91851435 )
( အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ ဒါနပြု၍ ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါပြီ )